Shaashadda ugu Fiican LCD ee Arduino | Qalabka bilaashka ah
Mashaariicda laxiriira Arduino aad bey caan u yihiin oo, sida Raspberry Pi, waa mid kamid ah mashaariicda loo adeegsado Qalabka Bilaashka ah ee Shirkadaha. Taasi waa sababta aan uga hadlayno mid ka mid ah iskudhafka ugu caansan ee isticmaala Arduino: LCD + Arduino.
Bandhigga 'LCD' waa qalab sii kordhaya oo dhaqaale iyo marin loo heli karo, taas oo ka dhigaysa ikhtiyaar aad u fiican in lagu raaco golaheenna Arduino. Laakiin Ma loo isticmaali karaa shaashadda LCD guddigayaga Arduino? Waa maxay mashaariicda loo isticmaali karo LCD iyo Arduino, isku-darkaan miyay mudan tahay in la isticmaalo?
1 Waa maxay LCD?
2 Waa maxay noocyada shaashadda lcd ee jira?
3 Waa maxay moodellada ugu caansan?
3.4 LCD-ka E-Ink
4 Sidee loogu xiraa shaashadda 'LCD' Arduino?
5 Ma lagugula talinayaa inaad u isticmaasho shaashadda LCD-da mashruuceenna?
Isticmaalayaasha bilowga ah ayaan ka warqabin waxa LCD u taagan tahay inkasta oo ay arki doonaan wax ka badan hal mar noloshooda. LCD wuxuu u taagan yahay Liquid Crystal Display, ama waxa noqda Liquid Crystal Display. Shaashad yar ama weyn oo inbadan oo naga mid ah ay ku aqaaneen aalado kala duwan sida saacadaha digniinta, shaashadaha saacadaha, xisaabiyaha, iwm ... Aaladaha elektarooniga ah ee aan dhamaadka laheyn ee la ballaariyay iyadoo ay ugu wacan tahay isku darka LCD + Arduino iyo Free Hardware.
Shaashadaha LCD waxay la jaan qaadayaan wixii Qalab Bilaash ah, oo ay ku jiraan looxyada Arduino Project, in kasta oo ay u baahan yihiin in looxyadu leeyihiin isku xirayaal ama biinano gaar ah si ay u sameeyaan isku xirnaanta guddiga korantada iyo shaashadda LCD.
A priori, ma jiraan wax caqabad ku ah isticmaalka cabbirka shaashadda LCD ee kala duwan. Si kale haddii loo dhigo, isla guddiga Arduino wuxuu adeegsan karaa shaashad 5-inji ah, 20 ”LCD ah ama cabir 5 × 2 ah, si looga hadlo wax yar. Laakiin waa inaan ka warqabnaa taas Guddiga Arduino lama mid aha kaarka sawir gacmeedka ama Motherboard-ka, sidaa darteed farriinta lagu soo bandhigayo shaashad uma shaqeyn doonto isla shaashad yar iyo shaashad weyn, illaa inta ay ka tahay isla guddiga Arduino.
Biinanka aan ugu baahan doono guddiga Arduino si aan ugu xirno shaashadda LCD waxay noqon doontaa kuwa soo socda:
GND iyo VCC
Sanduuqyada D0 illaa D7
Laba biin oo loogu talagalay Backlight
Haddii aad haysatid biinno iyo biinamo kugu filan oo kor ku xusan, Shaashadda 'LCD' waxay si fiican ula shaqeyn doontaa guddiga Arduino. Marka had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad hubiso biinanka labada qalab si aad u hubiso in isku xirnaanta ay jirto. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waa ku yartahay guddiga Arduino in uusan ku xirmi karin shaashadda lcd iyo haddii ay dhacdo xaalad noocaas ah, waxaa jira qaybo kala duwan oo lcd ah oo suuqa yaalla oo si fudud ugu xiran Arduino oo kharashkiisuna yahay mid la awoodi karo.
Waa maxay noocyada shaashadda lcd ee jira?
Waxaan hadda ka helnaa seddex nooc oo ah shaashadda lcd suuqa:
El Line LCD waa nooc shaashad ah oo muujinaya macluumaadka khadadka. Macluumaadka waxaa la dhigaa xariiqyo mana ka bixi karno jiritaankaas. Noocan ah LCD waa midka ugu isticmaalka badan, dhaqaale ahaan loo yaqaan laakiin sidoo kale waa nooca lcd ee bixiya ciyaarta ugu yar, maadaama kaliya waxay muujineysaa macluumaad cayiman oo caadi ahaan waa qoraal.
El dhibic lcd Waxay u shaqeysaa si isku mid ah noocii hore ee ldd, laakiin ka duwan kii hore, ee lcd-ka dhibcaha waxaan ku leenahay shax dhibco ah. Sidaas darteed, nooca noocan ah ee loo yaqaan 'lcd' waxaan ku dhejin karnaa qoraalka iyo xitaa sawirrada meel kasta oo ka mid ah shaashadda lcd. Maxaa intaa dheer waxaan ku yeelan karnaa dhowr cabbir xarfaha oo isku shaashad ah, wax aan ka dhicin muuqaalka lcd ee khadadka, oo cabbirkoodu had iyo jeer isku mid yahay.
El Bandhig OLED Waa noocyo badan oo soo bandhig ah oo iyaga u gaar ah halka kuwa kalena ay ku dhex jiraan noocyada lcd. Bandhigga OLED waa shaashad na tusaysa macluumaad laakiin dhismihiisu wuu ka duwan yahay kan shaashadda LCD illaa iyo hadda wuxuu u adeegsadaa dyoodyo uu hogaaminayo waxyaabo dabiici ah abuurkiisa. Si ka duwan noocyadii hore, bandhigyada OLED waxay bixiyaan qaraar sare, midab iyo isticmaalka tamarta oo hooseeya. Sida kormeerayaasha kombiyuutarka ama dot lcd, shaashadaha OLED waxay adeegsadaan shaxda dhibco ama pixels (maadaama aan u adeegsan karno dhowr midab isla muuqaalka) si aan u soo bandhigno waxyaabaha ku jira.
El LED ama LCD Led bandhigay wuxuu la mid yahay OLED Display, laakiin diodyada hogaaminaya kuma jiraan waxyaabo dabiici ah. Waxqabadkeedu maaha mid aad u sarreeya sida muujinta OLED laakiin waxay bixisaa xallin ka badan shaashadda LCD iyo waxay bixisaa midab.
El Bandhigga TFT waa nooca ugu dambeeyay ee lcd ee ka jira suuqa. Waxaan dhihi karnaa in bandhigga TFT uu adeegsanayo pixels sida kormeerayaasha kombiyuutarka ama telefishinada waxaanna ku sii deyn karnaa nooc kasta oo macluumaad ah shaashadahaas. Isticmaalkeeda tamarta ayaa ka weyn nooc kasta oo ka mid ah noocyadii hore sidaa darteed cabirro yaryar ayaa loo isticmaalaa. Cabbirka bandhigyadan waxaa lagu cabiray injis ka duwan noocyada kale ee bandhigyada. Waxaa lagu cabiraa jilayaal ama balaca shaashadda.
Waa maxay moodellada ugu caansan?
Thanks to ganacsiga khadka tooska ah waxaan ka heli karnaa moodello aan tiro lahayn oo ah muujinta lcd, laakiin in yar uun baa ugu caansan. Caankani wuxuu ugu wacan yahay helitaankiisa fudud, qiimahiisa, waxqabadkiisa ama si fudud tayada.. Halkan waxaan ka hadleynaa moodooyinkaas:
Bandhigani wuxuu ka yimaadaa taleefannadii hore ee Nokia 5110. LCD-ka mobiladan ayaa ka fiicnaaday mobilada shirkadduna waxay sii waday inay iibiso muuqaalkan si loogu isticmaalo. Shaashaddu waa mid isku mid ah waana nooca loo yaqaan 'Lineas LCD'. Bandhigga Nokia 5110 wuxuu bixiyaa 48 saf iyo 84 sadar. Awooddiisu waa tan ay bixiso suurtagalnimada soo bandhigida sawirrada inkasta oo aysan si hufan u shaqeyn. Waxqabadkeedu aad ayuu u wanaagsan yahay inkasta oo waxaan u baahan doonaa inaan isticmaalno iftiinka gadaal si aan si sax ah ugu daawano shaashadda, guud ahaan waxaa badanaa la socda laydhkan iftiinka ah inkasta oo ay jiri karaan cutubyo hawshan ka maqan. Bandhigu wuxuu adeegsadaa darawal Philips PCD8544. Shaashadda Nokia 5110 LCD waxaa laga heli karaa dukaamada 1,8 euro.
Module Hitachi HD44780 LCD Waa module uu abuuray soosaaraha Hitachi. Gudiga lcd waa monochrome waana nooc xariiqa. Waan heli karnaa moodal leh 2 sadar oo min 16 xaraf ah iyo moodal kale oo leh 4 sadar oo midkiiba 20 xaraf yahay. Waxaan badiyaa helnaa muuqaalka Hitachi HD44780 LCD ee dukaan kasta laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa inaan helno kaliya kantaroolaha Hitachi HD44780 shaashad la'aan, qiimaha ayaa naga caawin kara xaaladdan, qiimaha shaashadda oo lagu daray xakamaynta 1,70 euro iyo kaliya darawalka euro ee 0,6.
Bandhigan lcd waa nooca OLED. I2C OLED LCD waa shaashad hal inch ah oo shaashadda OLED ah oo ku xirta Arduino iyadoo loo marayo borotokoolka I2C., borotokoolkani wuxuu adeegsadaa bas laba geesood ah oo noo oggolaanaya inaan keydinno biinanka, noqoshada lagama maarmaanka afar biin hortooda kuwa lama huraanka ah ee horay loo soo sheegay. Darawalka shaashadan 'LCD' waa mid guud sidaa darteed waxaan u isticmaali karnaa maktabado bilaash ah isticmaalkeeda. Qiimaha qaabkani ma ahan mid raqiis ah sida moodooyinkii hore laakiin haddii ay awoodi karaan isticmaaleyaal badan, waan awoodnaa raadi 10 euro cutubka.
Shaashadda E-Ink LCD waxay isticmaashaa khad elektaroonig ah si ay u muujiso macluumaadka. Sida moodooyinka kale, wuxuu adeegsadaa borotokoolka I2C si uu ula xiriiro Arduino. Shaashaduhu waa nooca TFT laakiin waxay isticmaalayaan khad elektaroonig ah taas oo ka dhigaysa isticmaalka si aad u hooseeya laakiin aan lumin xal. In kasta oo aysan jirin shaashado midab leh (xilligan), dhammaantood waa wada ee miisaanka madow iyo cawl.
Sida xiisaha loo qabo moodalkan shaashadaha lcd, waa inaan dhahno qiimaha iyo baaxadda way midoobeen. Waan awoodnaa hel cabbiro kala duwan oo cabirka weynaada, shaashadda ayaa qaalisan. Sidaa darteed, 1 ama 2,5 shaashad E-Ink ah Waxay leeyihiin qiimo dhan 25 euro halkii cutub. Guddiyada cabirkoodu ka weyn yahay waxay gaari karaan 1.000 euro halkii cutub.
Sidee loogu xiraa shaashadda 'LCD' Arduino?
Xidhiidhka ka dhexeeya shaashadda LCD iyo Arduino waa mid aad u fudud. Mabda 'ahaan waa inaan raacno biinanka aan kor ku soo xusnay oo aan ku xirno guddiga Arduino. Jaantuska isku xirka wuxuu noqon lahaa kuwan soo socda:
Laakiin maahan waxa kaliya ee aan ku qasbanaanayno inaan xisaabtano si aan ugu xirno shaashadda LCD-ga Arduino. Maxaa intaa dheer Waa inaan isticmaalnaa maktabad naga caawin doonta inaan siino barnaamijka aan abuureyno koodhka lagama maarmaanka u ah inuu shaqeeyo si sax ah shaashadda. Dukaankan buugaagta waxaa loo yaqaan LiquidCrystal.h waxaana lagu heli karaa bilaash iyada oo loo marayo websaydhka rasmiga ah ee Arduino. Maktabadani waa in loo adeegsadaa sida maktabadaha kale, iyaga oo ugu yeeraya bilowga koodhka sida soo socota:
Hab fudud oo dhakhso leh oo loogu talagalay guddiga Arduino inay kula shaqeeyaan shaashadda LCD.
Ma lagugula talinayaa inaad u isticmaasho shaashadda LCD-da mashruuceenna?
Ku sii wad kor ku xusan, waa inaan isweydiino hadii runti ay ku haboontahay inaan helno shaashad LCD iyo Arduino mashruuc shaqadeena ama mashruuckeena. Shakhsiyan, waxaan u maleynayaa in mashaariicda qaarkood ay lagama maarmaan tahay inta hartayna ay tahay wax shaqsi ahaan ka badan intii loo baahnaa. Tusaale ahaan, waxaan ka hadli karnaa moodooyinka ugu dambeeyay ee daabacadaha 3D, moodooyinka kaliya ku daraya mararka qaarkood muujinta LCD iyo wax kale, laakiin qiimaha moodelku aad ayuu qaali u yahay.
Xaaladahan oo kale, uma maleynayo inay lagama maarmaan tahay in la isticmaalo bandhig LCD ah, laakiin tani maahan kiiska mashaariicda qaarkood ee muuqaalka LCD uu aad muhiim u yahay. Tusaalooyinka dambe waa mashaariicda sida saacadaha, qalabka ciyaarta ama si fudud goob-tilmaame GPS. Mashaariicda taas u baahan tahay inaad yeelato muuqaal garaaf ah oo wax ku ool ah. Waxa aan dhahno waxay noqon karaan nacas, gaar ahaan kuwa ugu khibrada badan adeegsadayaasha, laakiin qayb kasta waxay kadhigi kartaa mashruuc kastaa inuu qaali noqdo xitaa wuxuu kadhigaa mid aan laqaadan karin Sidaa awgeed, waa muhiim in la qiimeeyo in mashruuceenu leeyahay shaashad LCD ah iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Shaashadda LCD iyo Arduino
3 mashruuc oo leh RGB Led iyo Arduino